KIANJA RABEMANANJARA : Nisaraka ady sahala 0-0 ny Tp Mazembe sy ny Fosa Junior
Nisaraka ady sahala aotra noho ny aotra ny Tp Mazambe ekipan’ny Repoblika Demokratikan’i Congo sy ny Fosa Junior (Madagasikara) tamin’ny lalao nifanaovana, omaly tao amin’ny Kianja Rabemananjara, Mahajanga. 16 septembre 2019
Lalao mandroso ity natao ity ary tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny “Champions League”. Azo lazaina ho niady dia niady ny lalao ary nahavita dingana tsara ny Fosa Junior nahatana io isa io. Ny Tp Mazembe mantsy raha tsiahivina dia efa indimy no nandrombaka ny tompondakan’i Afrika teo amin’ny lalao baolina kitra. Tafakatra teo amin’ny antsasa-dalana ihany koa izy ireo tamin’ny taona 2015 na dia raraka ihany aza. Tahaka ny mahazatra dia nisy ny tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’ny roa tonta taorian’ny lalao. Nambaran’ny mpanazatra ny Fosa Junior, Titi Rasoanaivo fa na sambany aza isika no niatrika ny “Ligue de champion” dia efa azo sokajiana sahady ho isan’ireo ekipa matanjaka aty Afrika.
“Nieritreritra ny handresy eto an-tanindrazana izahay saingy sahala ny lalao. Amin’ny ankapobeny na misy aza ny lesoka, niezaka nanao izay tratry ny heriny ny fosa Junior. Porofo izany fa azo atao tsara ny milahatra amin’ireo ekipa vaventy any Afrika. Rehefa nandeha ny lalao dia hita ho sahirana kely isika teo afovoany ary nanova filalao nampiditra tany amin’ny sisiny. Efa mivoatra amin’ny ankapobeny ny fomba filalao ary hitady fomba hafa hampivoarana izany izahay hiatrehana ny lalao miverina”, hoy ny fanazavan’ity mpanazatra ny Fosa Junior ity. Nambarany koa fa “efa tapakevitra ny handray anjara ny mpilalao ka tsy maintsy miady hatramin’ny farany.
Ny fandresena ny Tp Mazembe any amin’ny taniny no tanjona na dia tsy nandresy aza teto. Azo atao ny mieritreritra fandresena amin’ny lalao famerenana na dia mifanandrina amin’ny ekipa vaventy tahaka izao aza. Miaritreritra ny handehanana lavitra foana izahay”, hoy hatrany ity mpanazatra ity. Tsiahivina fa any Congo indray ny lalao miverina no hatao afaka roa herinandro eo ho eo.